Kylian Mbappé oo ka warbixiyay dareenkiisa kaga aadan ku guuleysiga abaal marinta Ballon d’Or – Gool FM
Kylian Mbappé oo ka warbixiyay dareenkiisa kaga aadan ku guuleysiga abaal marinta Ballon d’Or
(PSG) 12 Okt 2018. Da’ayarka reer France iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa iska diiday in lala barbardhigo xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Kylian Mbappé ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “TF1” ee dalka France wuxuu ku sheegay inaysan xiligan habooneen in lala barbardhigo Messi iyo Ronaldo.
“Marka ay xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ay jireen da’adan oo kale tirakoobka muhiim ma ahayn, sidoo kale qaabka ay u ciyaarayeen, sidaas darteed ma haboona inaan nafteyda la barbar dhigo iyaga”.
“Kuma fikirayo xiligan abaal marinta Ballon d’Or, sababtoo ah haddii aan waxyaabo kale ka fikiro, waxaan noqonayaa qof xaasid ah, sidaas darteed waxaan door bidayaa ciyaarta iyo guusha wada jirka ah”.
Si kastaba xaflada ay majalada caanka ah ee France Football ku bixin doonto abaal marinta Ballon d’Or ayaa waxay dhici doontaa 3-da bisha December ee soo aadan, xiligaas oo lagu dhawaaqi doono guuleystaha abaal marintan.
Inter Milan oo si cad isaga diiday in ay u dhaqaaqi doonto saxiixa Luka Modric suuqa furmi doono bisha January